किन पारित हुनुपर्छ शिक्षा नियमावली | EduKhabar
किन पारित हुनुपर्छ शिक्षा नियमावली
अहिले शिक्षा क्षेत्रमा दुईवटा पक्ष चर्चाको विषय बनेका छन्, संघियतामा शिक्षा क्षेत्रको संरचना र शिक्षा नियमावली । परम्परागत राज्य प्रणाली अन्त्य भएर संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको ब्यवस्थापन भइसकेको छ । त्यसअनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचनको घोषणा पनि भएको छ । कर्मचारीको ब्यवस्थापनअन्तर्गत भएका गतिविधिले शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि तरंगित बनाएको छ ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनपछि शिक्षा नियमावली बनाउन हामीले मोटामोटी सबै बिधि पार गरिसक्यौं । तर, अन्तिममा यसमा अवरोध आएको छ । स्थानिय तहको संरचनाअनुसार शिक्षा नियमावलीको ढा“चा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने बहस जारी छ । क्याबिनेटमा पुगिसकेको नियमावली दर्तासम्बन्धी विषय यसै सन्दर्भमा जोडिएको छ ।
संबिधान जारी भएदेखि नै राजनीतिक रुपमा बुझाइमा ठूलो समस्या देखिएको छैन । अब सिंहदरबारको अधिकार स्थानिय तहमा जाने भयो, स्थानिय सरकार सक्तिशाली हुन्छन, जनताले आफ्नो घरदैलोमै सक्तिशाली सरकार पाउ“छन, भन्ने साझा बुझाइ राजनीतिक छ । तर, यो अनुभुति राजनीतिक रुपमा जति भएको छ अन्य क्षेत्रले त्यहि रुपमा हुन सकेको देखिएन । कर्मचारी, प्राज्ञिक, बौद्धिक, पत्रकारितालगायतका क्षेत्रहरुमा बहस उत्पन्न भएको देखिएको छ । यी क्षेत्रमा अहिले अलि बढि तरङ्ग उत्पन्न भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।
अरु क्षेत्रमा त्यस्तो छैन । स्थानिय तहमा ७४४ नै हुन पर्ने वा नपर्ने ? धेरै हु“दा राम्रो वा थोरै हुदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक कुराबाट सोच्दा बहस होला । तर तरंग आउने गरी राजनीतिक क्ष्ँेत्रमा बहस छैन । संघियता लागु गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सबैभन्दा सकरात्मक पक्ष यो हो । संघियताको कार्यान्वयनका लागि हिजोदेखि नै राजनीतिक दलका नेताहरु एक भएर लागेका थिए । त्यसैले पनि तरंग नभएको हो ।
राजनीतिक बाहेकका क्षेत्रमा देखिएको तरङगलाई ब्यवस्थापन गर्ने कुरा अलि जटिल बनेको छ । कर्मचारी ब्यवस्थापनको कुरा पनि जटिल छ । हामी स्थायी सरकार भन्ने कर्मचारी ब्यवस्थापनमा जटिलता छ । पछिल्ला १५/१६ वर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व स्थायी सरकारले गरिसकेको थियो । गाविसको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सबै काम गाविस सचिवले गरेका थिए । गाविस सचिव स्थानिय विकास मन्त्रालयको मातहतमा परिचालित भएको हो । गाविस सचिव भनेको स्थानिय विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा परिचालिन हनुे र त्यहि अन्तर्गत रहदा सबै सरकारको प्रतिनिधित्व स्थानिय तहमा आइपुग्दा पनि गाविस सचिवले नेतृत्व गर्ने हो, उ नै सर्वेसर्वा हो, त्यहा अरु निकाय पनि आउनुपर्दा अरु निकाय त्यसको मातहतमा भएर आउनुपर्छ भन्ने धारणाले अझ बढि भ्रम सृजना गरेको छ । यसले समस्या सृजना गरेको छ ।
अब हामी स्थानीय तहको प्रसाशन र कर्मचारी ब्यवस्थापनको कुरा गर्दा त्यहा कुन कुन निकायका कति कर्मचारी आवस्यक हो त्यसको प्रक्षेपण भइसकेको छैन । स्थानिय तहको संख्या र सिमाङकन निर्धारण आयोगले छलफल गरिरहदा सामान्य गाउ“पालिका जहा“ ५ वटामात्र वडा रहन सक्छन त्यो ठाउ“मा पनि जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कोणबाट न्युनतम ७१ जना कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनिएको थियो ।
मोटामोटी खाका तया भएको थियो, यद्यपि त्यतिबेलाको भन्दा केहि परिवर्तन भएको छ । ७१÷७२ जना कर्मचारीमध्येबाट त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ ? हामीले छुट्टाछुट्टै कार्यालयलाई ब्यवस्थापन गर्ने र त्यसको नेतृत्व वडा प्रशासनिक निकायले गर्ने, अहिले जिल्लास्तरीय कर्मचारीको ब्यवस्थापन आ–आफ्ना मन्त्रालय अन्तर्गत रहन्छन तर सबै कार्यालय प्रमुखहरुको पनि प्रमुख भएर सिडियोले काम गरिरहेको छ । अहिले भर्टिकल्ली ब्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ, तयसैगरी अहिले स्थानिय तहको नेतृत्व भर्टिकल्ली नेतृत्व गर्ने काम गाविस सचिवले गर्ने हो भन्ने ढंगले सोचाई त्रुटिपुर्ण छ र त्यहि त्रुटिपुर्ण सोचाइका कारण तरंग आएको हो ।
स्थानिय तहमा खटिएका कर्मचारीको ज्येष्ठताको आधारमा त्यसले प्रशासनिक नेतृत्व गर्दछ । हामी एकिकृत कार्यप्रणालीमा जान्छौं । भोली स्थानिय तहले शिक्षा कार्यालय छुट्टै बनाउछौं, स्थास्थ्य, विकास सम्बन्धी कार्यालय छुट्टै बनाउछौं भनेछ भने त्यहाको स्वायत्तताको कुरा हो । त्यो स्थानिय तहले कानुन बनाएर काम गर्न सक्छन । अहिले एकिकृत कार्यप्रणालीभित्र कर्मचारीको ब्यवस्थापन हुन्छ । यसलाई अलि बढि छलफल बहस गरेर निस्कर्षमा जानुपर्छ, अहिले त्रुटि ग¥यौं भने कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । यो कुरामा पनि सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ ।
स्थानिय तहले रोकिदैन शिक्षा नियमावली
शिक्षा नियमावलीका विषयमा पनि अहिले शिक्षा क्षेत्रमा चर्चा छ । नेपालको संबिधान जारी भएपछि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन जारी गरिएको हो । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गर्दा पनि यो सक्रमणकालिन अवस्था हो भनिएको थियो । संबिधानसंग बाझिने गरी शिक्षा ऐन बनाएका छैनौ । संबिधानले निर्दिस्ट गरेको कुराहरुको कार्यान्वयनका लागि पनि संघिय ऐन बनाउनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षाका पनि कतिवटा संघिय, प्रादेशि र स्थानियको ऐन बनाउनुपर्ने हो लेखाजोखा हुदै जान्छ । ति ऐन बन्नुभन्दा अगाडीको कुरा ब्यवस्थापनका लागि पनि अहिलेको शिक्षा ऐन जरुरी त र हामीले क्याविनेटमा पठाएको शिक्षा नियमावली पारित गर्न जरुरी छ । त्यसैले तत्काल पारित गर्नुपर्छ । कतिपय कुरा संबिधानसंग बाझिएका हुन सक्छन, ति निस्क्रिय हुदै जान्छन् । अहिले पनि पुरानै कुराहरु ब्यवस्थापन गर्नका लागि प्रस्तावित नियमावली आवस्यक छ ।
अहिले नै कक्षा ११ को स्वीकृति दिनुपर्ने छ । कुनै एउटा माविलाई ११ कक्षा सञ्चालनको स्वीकृति अहिलेको शिक्षा बिभागले दिन पाउ“दैन । हिजोको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले अनुमति दिन्थ्यो । परिषद खारेज भएको अवस्थामा नियमावलीमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कक्षा ११ को स्वीकृति शिक्षा बिभागले दिन सक्छ । अहिले भइरकेका माविहरु स्वाभाविकरुपले १२ कक्षासम्म सञ्चालन हुनुपर्दा ११ कक्षा सञ्चालन गर्न पनि नियमावली चाहिएको छ । शिक्षक ब्यवस्थापनका कुरा त अलि टाढाका कुरा भए । नया“ शैक्षिकसत्रसंगै शिक्षामा गर्नुपर्ने ब्यवस्थापनका कुरा धेरै छन् । कतिपय काम नियमावली बिना गर्न सकिदैन । त्यसैले नियमावलीको अत्यावस्यक छ ।
हिजो शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनपछि दुई वर्षपछि नियमावली जारी गरे पनि बिग्रिएको थिएन । आठौं संसोधनपछि दुई वर्षमा त यो ऐन नै खारेज गरेर अर्को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐनमा नै एक वर्षभित्र धेरै काम गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । असार १५ पछि शिक्षा ब्यवस्थापनका कुरा लिएर हामी गयौं भने क्याबिनेट गयौं वा संसदमा प्रस्ताव लिएर गयौं भने पनि त्यो स्वतः खारेज हुने स्थिति आउछ । गत असारमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन प्रमाणीकरण भएको थियो त्यसको एक वर्षभित्र अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी काम गर्नका लागि अलि चाडो नियमावली चाहिन्छ भनेर प्रयत्न गरेका हौं । शिक्षा मन्त्रालयबाट पहलकदमी लिंदा लिदै पनि बिभिन्न पक्रिया पु¥याउन खोज्दा केहि जटिलता भयो । शिक्षा मन्त्रालयबाट मस्यौदा अर्थ, कानुन हुदै जादा केहि जटिलता भए । अर्थ र कानुनका सरोकार पनि रहेको थियो ।
आज बनेको ऐनका आधारमा सरकारले बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ, नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयबाट आइसकेपछि अब आवस्यकीय परिमार्जन गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई छैन । कानुनबाट आएको मस्यौदालाई जस्ताको जस्तै क्याबिनेटमा गग्यौं । मन्त्रिस्तरमा निर्णय भएर सचिव मार्फत मुख्य सचिवकोमा लैजाने हो । त्यहा“ दर्ता भएपछि क्याबिनेटको प्रस्ताव बन्ने हो ।
संघियतामा ७४४ वटा स्थानिय तह दर्ता भइसक्यो, शिक्षा नियमावलीले जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कुरा गरेको छ त्यसैले यो परिमार्जन गर्नुपर्छ, शिक्षा नियमावली दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर मुख्य सचिवले रोक्नुभएको छ । शिक्षा नियमावली रोक्ने अधिकार मुख्य सचिवलाई छैन । मन्त्रालयको तर्फबाट लगिसकेपछि परिमार्जन गर्नका लागि क्याबिनेटले आफुनो तर्फबाट परिमार्जन गछ । फिर्ता नै गर्नपर्ने स्थिति हो भने क्याबिनेटले निर्णय गरेर सम्बन्धीत मन्त्रालयमा फिर्ता गर्छ । मुख्य सचिवले शिक्षा मन्त्रालयबाट गएको शिक्षा नियमावली फिर्ता गर्ने अधिकार छैन । त्यहि आधारमा कर्मचारी, शिक्षक र सरोकार पक्षले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ ।
नियमावलीमा हाम्रा कुरा के समावेस भए भन्ने मुख्य विषय होइन । शिक्षा नियमावली अहिलेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हो । त्यसमा मार्गप्रसस्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो । नियमावली क्याबिनेटको सम्पत्तिको रुपमा पुगेको छ । क्याबिनेटले नै निर्णय गर्छ ।
७४४ स्थानिय तह घोषणा गरिसकेपछि अहिले पनि अरु ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा छन् । शिक्षा सम्बन्धी पनि थुप्रै नियम निर्देशिका छन् । स्थानिय तहको संरचना निर्माण भइसक्यो त्यहि भएर यो संग बाझिएका सबै ऐन खारेज भए भनेर घोषणा गरेका पनि छैनौ । शिक्षा ऐन कायम रहने त्यसलार्य कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा कुनै कोणबाट पनि न्यायोचित निर्णय हुन सक्दैन । यसबारेमा क्याबिनेटले निर्णय गर्नेछ ।
यसको आवस्यकताका विषयमा क्याबिनेटमा छलफल हुन्छ । आवस्यकता अनुसार क्याबिनेटका समितिमा गएर परिमार्जन हुन पनि सक्छ । परिमार्जन गर्ने कुरा एउटा प्रक्रिया हो त्यसलाई स्वीकार गर्छौ । यो शिक्षा मन्त्रालयकोमात्र मुद्धा नभएर शिक्षाका सबै सरोकारवालाको मुद्धा हो ।
नियमावली रोकिएको कारण
हामीले शिक्षा नियमावली सात गर्ने दर्ता ग¥यौं । त्यो भन्दा अघि नै ७४४ वटा स्थानिय तहको घोषणा भएकाले समस्या देखाइयो । तह दर्ता भएपनि जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय भन्ने नै किन आवस्यक भयो ? ७४४ वटाको ढा“चामा त्यो छैन, त्यहि अनुसार नियमावली ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । ७४४ हाम्रोमात्र सरोकारको विषय होइन । क्याबिनेटमा लैजान प्रधानमन्त्रीसंग सल्लाह भएर पढाइएकाले रोक्न हुदैन । स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार मुख्य सचिवले दर्ता गर्नुभएन । दर्ताका लागि क्याबिनेटले नै निर्देश गर्नुपर्ने छ ।
संघियतामा शिक्षाको छुट्टै मेकानिजम
शिक्षा मन्त्रालयको भावि संरचना के भन्ने विषयमा पनि छलफल भएका छन् । मन्त्रालयको नाम के भन्ने ठुलो कुरा होइन, मन्त्रालयले अहिले गरिरकेको काम भोलीको संघिय संरचनामा जरुरी छ की छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । त्यो जरुरी छ ।
संबिधानले स्थानिय तहलाई बलियो बनाउनका लागि माध्यमिक तहको जिम्मेवारी स्थानिय सरकारलाई छ । त्यसका साथै शिक्षाका संरचना हुनुपर्छ । मानव संशाधन मन्त्रालयभित्र शिक्षा बिभाग होला वा कुनै न कुनै मेकानिजम हुनुपर्छ । स्थानिय तहमा शिक्षाको मेकानिजम बनाउन झनै बढि आवस्यकता छ ।
(शिक्षामन्त्री पौडेलद्धारा फेसबुक मार्फत सार्वजनिक धारणा )
kcchudamani3 years ago
अस्थाई शिक्षकलाइ कि परीक्षा देऊ कि त खाजा खर्च बुझ भनि जुवाको जस्तो दाऊमा डुबाउनु मानवता र श्रम सम्मान को खिल्ली उडाउनु हो।निरिह अस्थाई शिक्षकहरुले कही गर्न नसके पनि इतिहासले धिक्कारने छ। राजा र दैव लागेपछि कसैको केहि लाग्दैन भन्थे तर राजा लाग्नु सबभन्दा दुर्भाग्य हुदो रहेछमंत्रीज्यु !
janardan pokharel3 years ago
सम्पादक ज्यू शिक्षा पत्रकार सञ्जाल, नेपाल (इजोन) ले यहि चैत्र १३ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रीले व्यक्त गरेको धारणा हो यो । शिक्षा मन्त्रीको यो धारणा चैत्र १४ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित उक्त सामग्रीलाई विभिन्न व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँगै शिक्षा विद् मनप्रसाद वाग्ले, शिक्षक महासंघका महासचिब तिलक कुँवर, हिसानका उपाध्यक्ष युवराज शर्मा, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल लगायतको उपस्थिति थियो । त्यस कारण तपाईंले भने जस्तो शिक्षा मन्त्रीले फेसबुक मार्फत् सार्वजनिक गरेको धारणा होइन यो ।
Rpkhanal3 years ago
Mantri g,facebook dharana bhanda sidhai pm sang chhalphal gari aabasyakta bodh garai niyamawali parit garauda ramro hunxki jasto lagx.
narayan sharma3years ago
माननीय मन्त्रि ज्यु यतिका समयपछि आउनलागेकाे नियमावलि राेकिनुमा कस्काे कमजाेरि देखियाे सवैलाई थाहा छ । यथासक्य पारित गराई कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नु हुदैन अन्यथा शिक्षा क्षेत्रमा थप चुनाैति खेप्नुपर्ने निस्चित छ !
बिष्णुमान श्रेष्ठ3 years ago
जुङ्गाको लडाइले नेपाली शिक्षा अब कति दिन बिगारी रहने मन्त्रीज्यू?
sashi shrivastava3 years ago
यो शिक्षा येन ले संघसंगठनका केहि केन्द्रिय पदाधिकारी 2052 साल का आयोग बाट स्थाइ भएको तर पेन्सन हुन समस्या रहेको लाई7बर्ष सेबा जोडी पेन्सन बनाउन माग पुरा भएको ले त्य्सता ब्याक्ती हरु यो शिक्षा येन पारित गराउन मरि परेको हो । यो शिक्षा येन ले न्या समर्चना अनुसार कुनै कुरा समेटेको छैन ।।।